Instinct of katsi | Noti Katsi
Katsi dzatinoziva nhasi, avo vanogovana hupenyu nesu mukutsinhana nedenga rekuzvidzivirira, chikafu nerudo, vakambogara kunze. Vakararama hupenyu hwakazvimirira, sezvinoita vazhinji felines munzvimbo yavo yechisikigo, uye ivo vaiuya chete pamwe chete apo yaive mwaka wekubereka.
Kunyangwe iyo nguva yadarika kubva ipapo -yakatenderedza zviuru gumi-, hunhu hwake hauna kuchinja zvakanyanya. Iyo yakasikwa yakasikwa katsi ichiri yakawanda kwazvo nhasi.
Masikirwo ndeekuita kwekupokana uko kunoshandurwa kuita kwakajairika maitiro. Hazhinji hunhu hwekatsi hunodzidziswa, asi izvo zvine hukama nekupona vakatoberekwa vachizviziva, sekuita kwekuyamwa nekukurumidza kana amai vavo vazvichenesa mushure mekuzvara, kana zvekugara nehama dzavo kuti vasarasikirwe kupisa.
Mumitambo iwe unogona zvakare kuona iyo yakasikwa yakasikwa katsi. Ivo, mushure memwedzi kana zvakadaro, vatotanga kutamba, kudzingirira zvinhu, kuruma zvese zvavanowana, kusvetuka, ... muchidimbu, vanotanga kuva katsi. Vanoita hunhu uhu zvakasikwa, pasina munhu anofanirwa kuvadzidzisa.
Mumakati, maitiro matatu echisikigo anogona kusiananiswa pamusoro pezvose zvinoita kuti vave mhuka dzinoshamisa:
1 Mhuka yakazvimiririra nemasikirwo
2 Kuvhima hunhu
3 Simba rekubereka
Mhuka yakazvimiririra nemasikirwo
Katsi imhuka dzinogara dzoga nemasikirwo. Ivo havavhimi kana kudya mumapoka akaita seshumba, uye vane nharaunda huru. Ivo vane nzira yekutaurirana inovabvumira kuziva izvo vamwe vari kunzwa uye nekudaro intuit maitiro avo; Naizvozvo, zviri nyore kwavari kuti vadzivise kupokana.
Ivo vanochinja-chinja, asi Izvo zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti hadzisi mhuka dzinoitwa mudzimba, asi kuti ndidzo dzinotibvumidza kugara munharaunda yavo.
Isu hatiwanzo kufunga nezvazvo, asi katsi imhuka dzinodya dzimwe mhuka. Ivo vanofanirwa kuvhima kuti vararame, asi havazi vese vanoziva zvekuita nechakapambwa chikambotorwa. Saizvozvo, kitsi idzo dzisina imwe yekuvadzidzisa kurova kwekupedzisira, chavachaita kutamba naye ... kana kuenda naye kumba.
Katsi dzinovhima - kana kuyedza - sezvo iwo achingova mashoma mavhiki ekare katsi. Mutambo - hongu, netambo uye mhuka dzakakomberedzwa 🙂 - dzinovatendera kuti vasimbise mhasuru yavo pavanenge vachivandudza hunyanzvi hwavo hwekuvhima sekutevera nekutapa.
Mhuka yega yega ine hunhu hwepamoyo hwekuchengetedza mhando dzayo kuburikidza nekubereka. Panyaya yekatsi, dzinozvara mukati memwedzi inodziya kuitira kuti vana vadzo vawane mukana wekupona. Asi, kana vachinge varoorana, mukadzi achasara ega.
Katsi ndiamai vakanaka kwazvo, kubvira inochengeta vadiki vako kusvikira vagona kuzvishandira vega, uye ichavadzivirira kubva kune vangangove vavengi. Iye achavachengeta nehanya kukuru uye nehunyoro, uye kana nguva yacho yasvika, achavadzidzisa zvese zvavanoda kuti vave vavhimi vakanaka.
Makitsi. Anoshamisa, akanaka, uye anodikanwa kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Instinct yekatsi
Mboro yangu inofura usiku, nei?
Iko kukanganisa kwekusiiwa pane kati